Golayaasha xeer-dejinta dalka oo isku raacay in hay’adaha fulinta gacan lagu siiyo dhamaystirka federaalaynta – Kalfadhi
Shirkii afhayeennada dowlad-goboleedyada dalka muddo saddex cisho ah uga socday Garowe ayaa maanta soo dhamaaday, waxaana ka soo baxay war-murtiyeed 17 qodob ah oo lagu soo aruuriyay qodobadii muhiimka ahaa ee laga hadlay intii shirku socday.
Goluhu waxay sheegeen in ujeedada shirkaas ay ahayd sii xoojinta iskaashga, khibrad is weydaarsiga, qorshaynta barnaamijyada tayo-kordhinta hay’adaha xeer-dejinta, qiimaynta mashaariicda taakulaynta golayaasha (Parliamentary support projects) kaas oo kulmiya dhammaan golayaasha, u kuur-gelidda baahiyaha golayaasha iyo qorshaynta hal xal u heliddooda iyo dib-u-eegista heshiiska is-afgaradka ah ee golayaasha xeer-dejinta.
Qodobada muhiimka ah ee goluhu isla meel dhigeen waxaa ka mid ah in golayaasha xeer-dejinta ee dalku ay dhiirigeliyaan isla markaasna garab siiyaan hay’adaha fulinta dalka ee heer federaal iyo heer dowlad-goboleed in ay dardargeliyaan dhamaystirka arrimaha ka dhiman federaalaynta dalka.
Docda kale, waxaa intii uu socday shirkaas lagu go’aamiyay in bulshada rayidka ah laga qaybgeliyo kulamada golaha afhayeennada xeer-dejinta Soomaaliya, maadama golayaasha ay mataalaan shacabka.
Hay’adaha xeer-dejinta dalka ayaa war-murtiyeedkooda ku caddeeyay in ay doonayaan in ay kaalin iyo door muuqda ku yeeshaan geedi-socodka arrimaha doorashooyinka dalka ku soo fool leh, iyadoo dowlad-goboleedyada qaarkoodna ay doorashooyin guud iyo kuwa baarlaman ku soo wajahan yihiin.
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo gudoomiyaha golaha wakiillada ee Puntland, Koonfur galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle ayaa shirka ka qaybgalay. Waxaa golaha aan ka joojin hoggaanka sare ee baarlamanka Galmudug.